Shuruudaha iyo Shuruudaha - Guddi la'aanta
Shuruudaha iyo Xaaladaha Isticmaalka
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Oktoobar 29, 2021
Shuruudahan iyo Shuruudaha Isticmaalka ("Shuruudaha") waxay khuseeyaan mareegaha 100Kin10, oo ah mashruuc maaliyadeed oo la kafaalo qaaday ee Xarunta Tides Center, oo ah shirkad faa'iido doon ah oo California ah oo aan faa'iido doon ahayn 100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org, iyo https://www.starfishinstitute.org ("Website-yada").
Fadlan akhri Shuruudahan ka hor intaadan isticmaalin mareegaha. Markaad gasho shabakadaha, waxaad ogolaatay Shuruudahan iyo sidoo kale annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Si kale haddii loo dhigo, haddii aadan ku raacsanayn Shuruudahan, waa inaadan isticmaalin shabakadaha.
Xaquuqda Xuquuqda ee Xoolaha
Waxyaabaha ku jira mareegaha oo ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidnayn, qoraalka, sawirada, sawirada, codka, cajaladaha maqalka, muusiga, fiidiyowyada, sifooyinka isdhexgalka ("Content") iyo calaamadaha ganacsiga, calaamadaha adeegga iyo calaamadaha ku jira ("Marks"), waa anaga aan leenahay ama shati noo siinay, iyadoo ku xiran xuquuqda daabacaada iyo xuquuqaha kale ee hantida aqooneed ee hoos yimaada sharciga.
Waxa ku jira waxa lagugu siiyay SIDA macluumaadkaaga iyo isticmaalka shakhsi ahaaneed iyo kuwa aan ganacsiga ahayn oo keliya. Waxaad ka soo dejisan kartaa ama ka daabacan kartaa nuqul ka kooban Mareegaha Mareegaha, waase haddii aad haysato dhammaan xuquuqda daabacaada iyo ogeysiisyada kale ee lahaanshaha ee ku jira. Waxaad qiraysaa inaadan helin wax xuquuq ah oo lahaanshaha adigoo soo dejinaya ama daabacaya nuxurka isticmaalkaaga gaarka ah iyo kuwa aan ganacsiga ahayn. Haddii aad jeclaan lahayd ogolaanshaha inaad u isticmaasho waxa ku jira siyaalo aanay ogolayn Shuruudahan, fadlan codsigaaga qoraal noogu soo dir info@100Kin10.org. In ogolaansho la bixiyo iyo in kale waa go'aankeena oo kaliya.
Waxaan ilaalineynaa dhammaan xuquuqaha aan si cad loo siinin iyo nuxurka. Waxaad ogolaatay inaadan ku lug yeelan isticmaalka, koobiyaynta, ama qaybinta mid ka mid ah Mawduuca aan ka ahayn sida si cad halkan loogu oggol yahay.
Waxaad ogolaatay inaad u isticmaasho shabakadaha ujeedooyinka sharciga ah oo kaliya kama qayb qaadan doontid ficil kasta oo wax u dhimaya amniga shabakadaha ama waxyeelo u geysanaya iyo waxa ku jira. Waxaad ogolaatay inaadan hareer-marin, baabi'in ama haddii kale faragelin sifooyinka la xidhiidha amniga ee Mareegaha ama sifooyinka ka hortagaya ama xaddidaya isticmaalka ama nuqul ka mid ah Wax kasta ama xoojinta xaddidaadaha isticmaalka shabakadaha ama waxa ku jira. Waxaad ogolaatay inaadan ururin ama ka goosan wax macluumaad shakhsi ah oo lagu aqoonsan karo shabakadaha. Waxaad ogolaatay inaadan ka codsan dadka isticmaala Website-ka ujeedo kasta, oo ay ku jiraan ujeedooyin ganacsi.
Xiriirinta Websaydhada Saddexaad
Mareegaha waxaa ku jiri kara xiriirinta mareegaha internetka ee qolo saddexaad. Mareegahan qolo saddexaad ma hoos tagno oo waxaa maamula shuruudaha isticmaalka iyo siyaasadaha gaarka ah. Marka aan bixino xiriirinta noocaas ah, waxaan sidaas u sameynaa ujeeddooyin macluumaad ah iyo ku habboonaantaada, oo waxaad gelisaa bogaggan khatartaada. Intaa waxaa dheer, isku xirka qolo saddexaad ma soo jeedinayso ku xidhnaanta, taageeridda ama kafaala-qaadka goobta ku xidhan annaga.
Ku xidhida shabakadaha
Waxa aad fasax noo haysaa in aad ku xidhidhdo bogag gaar ah ama qaybo ka mid ah mareegaha mareegaha adiga oo isticmaalaya ciwaanka bogga dhabta ah ama kelmad ama weedh. Ma laga yaabaa inaadan u isticmaalin wax calaamado ah ujeedadan. Sidoo kale, fadlan la soco in waxa ku jira Shabakadyadu ay isbedeli karaan, mana dammaanad qaadi karno in xiriirintaadu ay sii wadi doonaan inay shaqeeyaan waqti dheer.
Xuquuqda daabacaadda/xadgudubka Hantida caqliga
Shabakadu hadda uma oggola isticmaalayaasha inay dhejiyaan ama soo gudbiyaan wax ka kooban. Haddii tani isbedesho, oo aad aaminsantahay in xuquuqdaada daabacaadda ama xuquuqaha kale ee lahaanshaha aqooneed lagu xad-gudbay Mareegaha Mareegaha soo dhejinta qolo saddexaad, fadlan nala soo socodsii adigoo ogeysiis qoraal ah u diraya:
Boostada: 100Kin10, Agaasimaha Fulinta, Attn: Teach for America, 25 Broadway, 11th Dabaqa, New York, NY 10004
Iimayl ahaan: info@100Kin10.org
Haddii ay khuseyso, xaaladaha ku habboon, waxa laga yaabaa inaan joojino, joojino ama joojino xisaabaadka isticmaalayaasha kuwaas oo ku xadgudbaya xuquuqda daabacaada ama xuquuqaha kale ee hantida garaadka ee dadka kale. Tan waxaa ka mid ah qaadista tallaabadan oo kale haddii aan hayno macluumaad muujinaya in isticmaaluhu uu yahay ku-xadgudbi soo noqnoqda, oo ay ku jirto haddii aan helno ogeysiisyo xad-gudubyo badan oo ku saabsan isticmaale.
WAXAAD OGSHIISAY IN ISTICMAALKAAGA MASKAXDA MASKAXDA AY UU NOQONAYO HALISTA KALIYA. Ilaa inta ugu dhamman ee uu ogolyahay sharciga, TIDES, saraakiisheeda, AGAASIMAYAASHA, SHAQAALAYAASHA, IYO WAKIILADA AFEEF DHAMMAAN DAmmaanadaha, CAD AMA KU DHAQAN, EE LA XIDHIIDHA WEBSITTERKA IYO ISTICMAALAAGA. MA SAMEYNO DAMMAANAD AMA WAKIILADA KU SAABSAN SAXDA AH AMA DHAMAYSTIRSAMADA MASKAXDAAN AMA NUXURKA BOGGA KASTA OO KU XIRIIRTA SHARCIGAAN OO U MALEYNAYNAYAA IN AANAY MAS'UULIYAD, AMA XILKA HAYDKA, MAAMULKA, (Mas'uuliyadda) Dhaawaca Shaqsiyeed ama Dhaawaca Hantida, ee Dabiicigasta ah si kastaba ha ahaatee, taasoo ka dhalatay gelitaankaaga iyo isticmaalka shabakadaha internetka, (III) gelitaanka ama isticmaalka adeegayaashayada iyo/ama wax kasta iyo dhammaan xogta shakhsiyeed ee , (IV) JOOJIN KASTA AMA JOOJINTA U GUDBIN AMA KA SOO GELINTA WEBSITTERKA, (IV) WIXII CAYYAATO AH, fayruusyo, Fardaha TROJAN, AMA wixii la mid ah oo loo gudbi karo ama loo soo maro mareegaha qof kasta, KHALAD KASTA AMA GACAN-QAAB KASTA OO KU SAABSAN AMA KHASAARE KASTA AMA KHASAARAHA NOOCA KASTA OO LAGU GALAY ISTICMAALKA WAXYAABAHA LA SOO BANDHIGAY, EMAILIL, LAGU GUDBIYAY, AMA HADDII KALE LASOO HELI KARO AMA SHARCIGA. Uma dammaanad qaadi karno, annagu ma dammaanad qaadi karno, AMA MAS'U'UULIYADDA ALAABTA AMA ADEEGYADA AY XAYAYSO AMA SOO BANDHIGAAN QOF SADEXAAD OO MARSIINKA AH AMA BOGGA GOOBTA AMA SHARCIGA AH EE AAN SAMEYNAYNIN SIDA WALBA OO KA MASUUL AH LA SOCODKA XIRIIRKA KASTA OO DHEXEEYA ADIGA IYO XISBIGA SADEXAAD EE BIXIYAYAASHA AMA ADEEGYADA.
DHACDOOYINKA DHACDOOYINKA, SARAAKIISA, AGAASIMAYAASHA, SHAQAALAYAALKA, AMA WAKIILADA, AYAA KUGU MASUULSAN KARAA SI toos ah, si toos ah, shil ah, gaar ah, ciqaab, AMA waxyeello ka dhalan karta, wixii ka dhalan kara , (II) DHAAWAC SHAQSI AH AMA DHAAWAC HANTEEDA, DACBIID KASTA SI KASTA, OO KA DHAXAYSA GELINTAADA IYO ISTICMAALKA WEBSITTERKA, (III) HEL KASTA OO AAN LA OGGOLIN LOO ISTICMAALO ADEEGSADAADA AMA SHURUUDAHAADA IYO/AMA DHAMMAAN IYO DHAMMAAN MACLUUMAADKA MAALIYADA EE HALKAAS KU XADAYSAN, (IV) JOOJIN KASTA AMA JOOJINTA U GUDBI INTA AMA KA SOO GALINTA WEBSITTERKA / AMA (V) KHALAD KASTA AMA GALIYADAHA NUXURKASTA AMA LUMISTA AMA KHASAARAHA NOOC KASTA OO LAGU GAAMO IYADOO IYADOO ISTICMAALKAAGA WAXYAABAHA LAGU SOO dhejiyo, iimayl la diro, ama la gudbiyo, ama si kale oo lagu heli karo websaytka websaytka HESHIISKA, JIDKA, AMA aragti kasta oo sharci ah,IYO HADDII URURKA LAGULA TALIYAY SUURUURTIGA DHAWRAHAAS XEERKA MAS'UULIYADDA EE SOO SOCDA WAA INAY DHACDO MAXKAMADDA UGU FURAN SHARCIGA EE XUKUNKA MADAXWEYNAHA.
WAXAAD SI GAAR AH U AQOONSAN TAHAY IN AANNA LOO MAA'IMANAYN doonin soo gudbinta isticmaaleyaasha sida sheekoyinka ama aflagaadada, dembiga, ama dhaqanka sharci darrada ah ee qolo saddexaad
Waxaad ogolaatay inaad difaacdo, magdhowdo oo aad hayso Tides, saraakiisheeda, agaasimeyaasheeda, shaqaalaheeda iyo wakiiladeeda, kana soo horjeeda wax kasta iyo dhammaan sheegashooyinka, waxyeelada, waajibaadka, khasaaraha, deymaha, kharashyada ama deynta, iyo kharashyada (ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn qareennada' khidmadaha) ee ka imanaya: (i) isticmaalkaaga iyo gelitaanka boggaga internetka; (ii) ku xad-gudbiddaada mid ka mid ah shuruudahan; (iii) ku xadgudubkaaga xuquuq kasta oo dhinac saddexaad ah ama sharci kasta, oo ay ku jiraan iyada oo aan la xaddidin xuquuq kasta oo daabacan, hanti, ama xuquuq gaar ah; ama (iv) sheegasho kasta oo ah in macluumaadka aad ku soo gudbiso mareegaha internetka ay ku xad gudubto xuquuq kasta oo dhinac saddexaad ah ama sharci kasta. Waajibaadkan difaaca iyo magdhawga ayaa ka badbaadi doona Shuruudahan iyo isticmaalkaaga Mareegaha.
Kartida Aqbalaada Shuruudaha iyo Shuruudaha Isticmaalka
Waxaad cadaysay inaad gaadhay da'da qaan-gaadhka ee xukunkaaga ama aad leedahay ogolaansho waalid ama masuul oo sharci ah oo aad si buuxda u awoodo oo aad karti u leedahay inaad ogolaato oo aad u hogaansanto Shuruudahan. Waxa kale oo aad cadaynaysaa in aad tahay ugu yaraan 16 sano maadaama shabakadahan aan loogu talagalin qof kasta oo ka yar da'da 16.
Shuruudahan iyo wixii xuquuq ah iyo shatiyada lagu bixiyo halkan, laguma wareejin karo ama laguma meelayn karo, laakiin waxa anaga noo qoondayn kara xad la'aan.
Shuruudahan waxaa lagu maamuli doonaa sharciyada muhiimka ah ee gudaha ee Gobolka Kaliforniya, iyada oo aan la tixgalinayn mabaadi'da sharciga ee iska hor imanaya. Dacwad kasta ama khilaaf kasta oo adiga iyo annaga naga dhexeeya ee ka dhasha gebi ahaan ama qayb ka mid ah mareegaha waxaa go'aan ka gaari doona maxkamad awood u leh oo ku taal Gobolka California. Shuruudahan, oo ay weheliyaan Siyaasadda Qarsoonnimada iyo ogeysiis kasta oo kale oo sharci ah oo anaga lagu daabacay boggaga internetka, ayaa ka koobnaan doona dhammaan heshiiska adiga iyo annaga ee khuseeya mareegaha. Haddii mid ka mid ah qodobbada Shuruudahan ay maxkamad awood u leh u aragto mid aan ansax ahayn, ansaxnimada qodobkan ma saameyn doonto ansaxnimada qodobbada ka haray Shuruudahan, kuwaas oo ahaan doona si buuxda oo dhaqangal ah. Ma jiro ka tanaasulid erey kasta oo ka mid ah Shuruudahan looma qaadan doono ka dhaafid dheeraad ah ama sii socota ee muddadaas ama xilli kasta oo kale, iyo guul-darridayada in aan sheegno wax xuquuq ah ama qodob hoos imanaya Shuruudahan ma noqon doonto ka tanaasulid xaqaas ama bixintaas. Adiga iyo TIDES waxaad ku heshiin doontaan in sabab kasta oo ficil ah oo ka dhalata ama la xidhiidha mareegaha mareegaha ay waajib tahay in ay ka bilaabmaan hal (1) sano gudahood ka dib marka ay dhacdo falku. Haddii kale, SABABTA caynkaas ah ee fal-celinta si joogto ah ayaa loo maamusay.